Laser Cutting nke Myọcha Cloth, Myọcha Ihe, filtration Media - Golden Laser
Ngwọta Mgbucha Laser maka Media Media
Automatic, ngwa ngwa na nkenke nhazi nke filtration akwa na flatbed CO2 laser ọnwụ igwe si goldlaser
Filtration Industry Okwu Mmalite
Dị ka usoro nchebe gburugburu ebe obibi na nchekwa nchekwa, nzachae n'ọtụtụ ebe na ọtụtụ ubi, si ulo oru gas-siri ike nkewa, gas-mmiri mmiri nkewa, siri ike-mmiri mmiri nkewa, siri ike-siri ike nkewa, ka ikuku ọcha na mmiri ọcha nke kwa ụbọchị n'ụlọ ngwa. Specific ngwa na-agụnye n'efu gas emission ọgwụgwọ na ike osisi, ígwè osisi, simenti osisi, ikuku filtration na akwa na uwe ụlọ ọrụ, nsị ọgwụgwọ, filtration na crystallization na chemical ụlọ ọrụ, ikuku filtration na ụgbọala ụlọ ọrụ, mmanụ circuit filtration, na ikuku filtration na ezinụlọ ikuku ikuku na ihe nhicha.
Ugbu a, ndị ihe nzachandị tumadi eriri ihe, kpara akwa. Karịsịa, ihe ndị nwere eriri bụ ihe eji eme ihe dịka owu, ajị anụ, linen, silk, eriri viscose, polypropylene, naịlọn, polyester, polyurethane, aramid, yana eriri iko, eriri seramiiki, eriri ígwè, wdg.
Na-aga n'ihu mmeba nke ngwa ubi nke filtration, ọhụrụ nyo ihe na-mgbe niile abụrụ, na filtration ngwaahịa nso si nyo pịa ákwà, ájá ákwà, ájá akpa, nyo ihuenyo, iyo katrij, iyo gbọmgbọm, nzacha, iyo owu nyo mmewere.
Goldenlaser na-enye CO₂ laser cutters maka teknụzụ teknụzụ
Nnukwu usoro CO2 laser ọnwụ igwebụ ezigbo maka ịcha filtration ajụ ekele na-abụghị ndị na kọntaktị usoro na nnukwu nkenke enweta site na laser doo. Tụkwasị na nke ahụ, usoro laser nke na-eme ka o doo anya na a ga-emechi ọnụ mbepụ mgbe ị na-egbu ya. Ebe ọ bụ na laser ịkpụ akwa nhicha adịghị adaba, nhazi na-esote na-adị mfe.
Ukwuu akpaghị aka
Teknụzụ laser na-egbutu ọnụ maka nsonaazụ kacha mma
Gịnị uru ka goldenlaser CO2 laser ọnwụ igwe nwere maka ịcha nyo media?
Laser ọnwụ aghọwo a na-emekarị maka iyo ụlọ ọrụ
Akpaaka akara nke ịcha n'ọnụ egbochi fringe
Ọ dịghị ngwá ọrụ eyi - ọ dịghị ọnwụ mma
Nkọwa dị elu na izi ezi nke imeghachi
Nnukwu mgbanwe na mmepụta n'ihi ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ
Akpaghị aka mmepụta usoro na ebu na nri usoro
Sistemụ akara n'ụdị dị iche iche: Mbipụta akwụkwọ inkjet na modul ink
Iyuzucha na nzacha nke ịkpụ anwuru ga-ekwe omume
Dị iche iche nhọrọ nke dị iche iche okpokoro nha - na nhọrọ kwesịrị ekwesị maka niile iyo nha
A ga-eme ụdị ụdị akwa akwa site na mmemme CAD ma gbanwere ndị na-egbutu laser CO2. Na-ekwe nkwa kpọmkwem, ọsọ na a definitive na àgwà nke iyo media nhazi.
Ngwa na ụlọ ọrụ nyo
• collectionjá collection akpa / filtration pịa ákwà / Industrial filtration eriri / Myọcha katrij / Myọcha akwụkwọ / ntupu ákwà
• Ikuku ikuku / Fluidization / Liquid filtration / Nka na ụzụ akwa
• Nhicha / Fjá Filtration / Screening / Solid filtration
• Mmiri filtration / nri filtration / Industrial nzacha
• Ngwuputa nzacha / Mmanụ na gas filtration / pulp na akwụkwọ nzacha
• Textile ikuku dispersion ngwaahịa
Kedu ngwa gi?
Myọcha ihe adabara laser ọnwụ
Myọcha ákwà, iko eriri, na-abụghị kpara akwa, akwụkwọ, ụfụfụ, owu, polypropylene, polyester, polyamides, naịlọn, PTFE, sox duct na ndị ọzọ na ulo oru akwa.
Hụ ihe nlele ndị ọzọ site na Laser
Anyị na-akwado ndị CO2 laser igwe maka ịcha nyo ákwà
JMC Series CO2 Flatbed Laser tingcha Machine
Gear na ogbe akwagharị
Nnukwu usoro ọrụ na-arụ ọrụ
Ofụri Esịt nchọ Ọdịdị
Oke ọsọ, oke nkenke, akpaghị aka
Nnukwu ike CO2 metal RF lasers si 300 watts, 600 watts ka 800 watts
Inyocha More CO2 Laser tingcha Machines
GOLDENLASER JMC Series High Speed ​​High Precision CO2 Ewepụghị ndina Laser cutter na Nkọwa
Akwa & Pinion
High nkenke ogbe & pinion ịnya ụgbọ ala usoro. Nchapu ọsọ ọsọ ruo 1200m / s, ACC ruo 10000mm / s2, jigide nkwụsi ike ogologo oge.
Isi mmalite Laser
World-class CO2 metal RF laser generator, kwụsie ike ma dịgide.
Na-arụ ọrụ Isiokwu
Agụụ-adọrọ ebuanu ebu ebu ebu table. Ewepụghị, akpaka, ala reflectivity si laser doo.
Akwa arụmọrụ "INK JET PRINTER" yana ịkpụ n'otu oge.
1. Bipute a gburugburu 2. Cutcha okirikiri
Nkenke erughị ala Nri
Auto-feeder: Erughị ala mgbazi na nri na laser cutter maka na-aga n'ihu nri na ọnwụ.
Ikike ikike ọgụgụ isi nwere onwe ya. The ahaziri akara usoro maka ulo oru akwa.
Japanese YASKAWA Servo moto. High nkenke, anụ ọsọ, bufee ikike.
Akpaka Sorting System
Ofụri Esịt akpaka sorting usoro. Mee ka ihe oriri, igbutu, sorting n'otu oge.
ịhọrọ GOLDENLASER JMC usoro CO2 Laser Cutting Machine
1. Nkenke erughị ala nri
Ọ dịghị erughị ala feeder ga mfe ịgwagbu ndị variant na nri usoro, n'ihi nkịtị mgbazi ọrụ multiplier; Erughị ala feeder na a sara mbara ofu na abụọ nke ihe n'otu oge, na-akpaghị aka sere na ákwà nnyefe site ala, niile usoro na-erughị ala, ọ ga-abụ zuru okè mgbazi na nri nkenke.
2. Akwa-agba ọnwụ
Akwa na pinion ngagharị usoro kwadebere ya na ike laser tube, ruru 1200 mm / s ọnwụ ọsọ, 8000 mm / s2 osooso ọsọ.
3. Automatic sorting usoro
Ofụri Esịt akpaka sorting usoro. Ihe oriri, ịcha, nhazi na otu oge.
4. Enwere ike ịhazi ebe ọrụ
2300mm × 2300mm (90.5 inch × 90.5 inch), 2500mm × 3000mm (98.4in × 118in), 3000mm × 3000mm (118in × 118in), Ma ọ bụ nhọrọ. Ebe ọrụ kachasị rụọ ọrụ ruru 3200mm × 12000mm (126in × 472.4in)
Ekiri laser ọnwụ igwe maka iyo ákwà ke edinam!
Kedu ihe onwunwe gị?
Anyị nwere teknụzụ nhazi laser zuru oke, gụnyere ịchacha laser, ihe osise laser, laser perforating na laser marking. Anyị nwere nnukwu ọnụọgụ data nchịkọta laser. Anyị nwere ike iji igwe laser anyị nwalee ihe gị, ma bulie usoro a. A na-enye ihe nlele na-anwale vidiyo, nhazi nhazi na ozi ndị ọzọ metụtara ya n'efu.
Gaa na gallery
Kedu ụlọ ọrụ gị?
Anyị na-e ahịa na-agba mbọ, miri ịgagharị mkpa nke ụlọ ọrụ, na-enye dijitalụ ngwa ngwa ngwọta, na-akwalite mgbanwe na upgrading nke ọdịnala ọrụ, na-enyere ndị ọrụ ọhụrụ na ịzụlite. Golden LASER na-etinye aka n'ọtụtụ ngwa ngwa, yana ọtụtụ ihe ngwọta dị na ọkwa kachasị na ụlọ ọrụ ahụ.
Gaa na ụlọ ọrụ ngwọta